Politika fandefasana - Molooco
mariho 1: Tsy tompon'andraikitra izahay raha tsy azo entina ny fonosana iray noho ny fampahalalana tsy hita na tsy feno na diso. Ampidiro azafady ny antsipirian'ny fandefasana marina rehefa mizaha. Raha tsapanao fa nanao hadisoana tamin'ny antsipirian'ny fandefasanao ianao dia mandefasa mailaka aminay [email voaaro] faran'izay haingana.
2. Mandefasa hafatra aminay [email voaaro]molooco.com manondro ny finiavana hamerina ilay entana. Azafady ampidiro amin'ny mailaka ireto manaraka ireto:
• Azafady mba alao antoka fa raha miverina vokatra ianao dia tokony ho amin'ny toe-javatra tonga lafatra izy ireo, tsy ampiasaina, tsy voasasa ary miaraka amin'ny fonosiny voalohany (raha azo ampiharina)
Molooco.com manome antoka fa hisy zavatra novidina tamintsika averina ao anatiny 7 andro fiatrehana, antoka averina-famerenam-bola.